Abenzi kunye nabanikezeli ngetheyibhile esemgangathweni I-China Standard Scissor Lift Itafile yeFektri
Itafile ezine zokuphakamisa isikere zisetyenziselwa ukuhambisa iimpahla ukusuka kumgangatho wokuqala ukuya kumgangatho wesibini. Isizathu Abanye abathengi banendawo encinci kwaye akukho sithuba saneleyo sokufaka ilifti yokuhambisa impahla okanye into yokuhambisa imithwalo. Unokukhetha itafile ezine zokuphakamisa isikere endaweni yesinyusi somthwalo.
Ukuphakama kokusebenza kwetafile yokuphakamisa isikere kuphezulu kunaleyo yetafile yokuphakamisa isikere kabini. Inokufikelela kubude beqonga le-3000mm kwaye owona mthwalo mkhulu unokufikelela kwi-2000kg, ethi ngokungathandabuzekiyo yenze imisebenzi ethile yokuphatha izinto isebenze ngakumbi kwaye ilunge.
Itheyibhile yokuphakanyiswa kwesikere esisisigxina isetyenziswa ngokubanzi kwimisebenzi yokugcina impahla, imigca yokuhlangana kunye nezinye izicelo zeshishini. Ubungakanani beqonga, umthwalo womthwalo, ukuphakama kweqonga, njl njl. Izixhobo zokhetho ezinje ngezibambo zolawulo olukude zinokubonelelwa.